अमेरिकामा मतदान ९ दिन बाँकि : ट्रम्पद्वारा मियामीमा 'अर्ली भोटिङ', कारण के?
अमेरिकामा मतदान गर्ने अन्तिम दिन नोभेम्बर ३ आइपुग्न ९ दिन बाँकि रहेको बेला ट्रम्प नया बसाई सरेको मियामी पुगेर अर्ली भोटिङ गरेका छन्। जीवनभर मेल भोटिङ गरेका उनले किन गरे त यसपटक अर्ली भोटिङ ? अमेरिका यस प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ।
मास्क लगाएर ट्रम्पले गरे मतदान, चुनावअघि ५ करोड मत खसेको दावी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावभन्दा अगाडि नै मतदान गरेका छन्। उनले शनिबार फ्लोरिडामा लाइब्रेरीको एउटा मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गरेका हुन्। ट्रम्प फ्लोरिडा निवासी हुन्।
दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएका रिपब्लिकन ट्रम्प र पहिलो पल्ट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका वाइडेनबीच पहिलो ‘प्रेसिडेन्सियल डिबेट’ मा चर्काचर्की परेको थियो। त्यसैले यसपालि दुई जनाबीचको विवादमा कसैले बीचैमा नटोकुन भनेर एकजनाको माइक बन्द गरिएको थियो।
ट्रम्प र बाइडेनको अन्तिम बहस: ट्रम्पको दावीप्रति वाइडेनको व्यङ्ग्य
बिएल संवाददाता - न्यूयाेर्क
बहसमा वाइडेनले ट्रम्प प्रशासन र त्यसको कार्यशैलीप्रति चर्को आलोचना र टिप्पणी गरेका थिए । उनले विशेष गरेर कोरोना महामारी व्यवस्थापन गर्न तथा जनता र अर्थतन्त्र जोगाउन नसकेको आरोप ट्रम्पमाथि लगाएका थिए ।
ओबामाले भने– हामी सबैले बाइडेन र कमलालाई जिताउनुपर्छ
पूर्वराष्ट्रपति ओबामाले बुधबार चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै डेमोक्र्याट राष्ट्रपति उम्मेदवार जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार कमला ह्यारिसलाई मतदान गरेर निर्वाचित गराउन अपिल गरे।
आज अमेरिकामा 'राष्ट्रपति बहस': आम्नेसाम्ने हुदैछन् तेस्रो र अन्तिमपटक बाइडन र ट्रम्प
आजको प्रश्न भनेको उनीहरू कसरी प्रस्तुत हुने हुन् भन्ने नै हो। सम्भवत: ट्रम्प पहिलो वहसमा जस्तो आक्रमक हुने छैनन्। तर, उनी घटनाबाट पाठ सिक्ने स्वभावका मान्छे नभएकाले पहिलेको भन्दा बढी आक्रमक पनि हुन सक्छन्।
बाइडेन र ह्यारिसलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने व्यक्ति पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति पदका लागि डेमोक्रेटिक तर्फबाट उम्मेदवार बनेका जो बाइडन र उपराष्ट्रपतिकी उम्मेदवार कमला ह्यारिसको अपहरण तथा हत्या गर्ने धम्की दिएको आरोपमा एक पुरूष पक्राउ परेका छन्।
अमेरिकी चुनावः चार करोडभन्दा बढीले खसाले अग्रिम मत
अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपति चुनावमा चार करोडभन्दा बढी मतदाताले मत खसाली सकेको बताइएको छ। चुनावमा हालका रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार जो बाइडेन आम्नेसाम्ने हुँदैछन्।
लर्खराउँदैछ 'हात्ती', चम्कदैछ 'गधा' : 'ट्रम्पेरिका'बाट मुक्त हुदैँछ अमेरिका
प्रदीप भटराई - वासिङ्टन डीसी
अहिलेको अवस्थामा यसपपालिको अमेरिकी चुनावको परिणाम के हुन्छ? यसको उत्तर कसैको पनि अधिनमा छैन। अंकगणित बाइडनको पक्षमा देखिन्छ। तर, ट्रम्प भनिरहेका छन्, 'मैले हारें भने त्यो धाँधली हो। म त्यसलाई मान्न बाध्य छैन।' बहालवाला राष्ट्रपतिले यसो भनिरहेको बेला अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ, 'भगवान, अमेरिकालाई आशीष देऊ। तर, त्यसको परिणाम के हुन्छ त्यो भगवान छन् भने उनैलाई पनि थाहा छैन।'
ट्रम्पको म्याराथन र्‍यालीः चीनलाई तर्साउँदै, किसानलाई खुसी पार्दे
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना संक्रमणको कारण आफू नभई चीन भएको आरोप लगाएका छन्।
अमेरिकी चुनावमा कोरोना प्रभावः तीन साताअघि नै १ करोड ३० लाख मत खस्यो
फ्लोरिडा विश्वविद्यालयका राजनीतिक पण्डित माइकल म्याकडोनल्डले हालै विभिन्न राज्यको तथ्याक संकलन गरेका थिए। उनले यी तथ्याकको अध्ययन गर्दै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा बुधबारसम्म १ करोड ३० लाख १५ हजार ६ सय ७५ मतदाताले भोट हालिसकेका छन्।
के ट्रम्पलाई पराजित गर्न उत्तर कोरिया योजनावद्ध रूपमा लागेको हो?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि मत माग्ने क्रममा आफूले उत्तर कोरियासँगको खराब सम्बन्ध सुधार गरेको दावी गरेका थिए। हुनपनि उनी सन् २०१८ मा उत्तर कोरिया पुगेर त्यहाँको शाषकसँग कुराकानी गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति बन्न पुगेका थिए। निर्धक्क रूपमा खतरनाक हतियार निर्माण गरिरहेको उत्तर कोरियाविरूद्ध अमेरिका पहिलेदेखि आक्रामक छ। उसले धेरैपल्ट कोरियामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाइसकेको छ।
मतदातासँग बाइडेन भने, ‘ट्रम्पले एक मात्र पाको उमेरको व्यक्तिलाई ख्याल गर्छन्, र त्यो उनी आफै हुन्’
आउँदो नोभेम्बर ३ मा हुने चुनावका लागि अति महत्वपूर्ण स्थान मध्य एक हो फ्लोरिडा। राष्ट्रपति चुनाव जित्न चाहिने २७० इलेक्ट्रोल कलेज मतका लागि फ्लोरिडा र ओहायोसहितका ‘ब्याटलग्राउण्ड’ राज्य महत्वपूर्ण रहेका छन्। सन् २०१६ को चुनावमा ट्रम्पले फ्लोरिडामा साँघुरो मत अन्तरले जितेका थिए।
झन् आक्रामक बन्दै ट्रम्प
दोस्रो कार्यकालका लागि सबै दाउँपेच अपनाइरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति ९ दिनभित्र कोरोना संक्रमण मुक्त भएका थिए। उनको कोरोनालाई लिएर डेमोक्रेटिक पार्टी निकै आक्रामक देखिएको छ। डेमोक्रेटिक पार्टीले ट्रम्पलाई कोरोना भएको सर्टिफिकेट देखाउन माग गरिरहेको छ।
किन ट्रम्प अन्तर्वार्ता दिन मिडियाको छनोट गर्छन?
हाल केही अमेरिकी मिडियाहरू ट्रम्पसँग अन्तर्वार्ता गर्न चाहन्थें। उनीहरू कोरोना पोजेटिभ भएर छिट्टै स्वास्थ्य लाभ गरेका अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पुनः आफ्नो क्यामरा अगाडि उभ्याउन चाहन्थें। तर, अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफूलाई चार वर्ष लखेटिरहेका मिडियाको विकल्पको रूपमा फक्स न्युजका लागि डाक्टर मार्क सिगललाई अन्तर्वार्ता दिए।
महंगो बन्दै अमेरिकी चुनाव: १४० हजार करोड खर्च हुने अनुमान
अमेरिकामा चुनाव हुन एक महिनाको समय पनि बाँकी छैन। जुन प्रकारले यसपालि चन्दा संकलन भएको छ, यसले नयाँ मापन तयार पार्देछ। किनभने कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पनि अमेरिकी चुनाव यति महंगो भइरहेको छ। थुप्रै मतदाता तथा चन्दा दाताले कोरोनाका कारण चन्दा दिएका छैनन्।
ट्रम्प ‘भर्च्युअल प्रेसिडेन्सियल डिबेट’मा सहभागी नहुने !
बिएल संवाददाता - न्युयाेर्क
निर्वाचनअघि राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले डिबेटमा भाग लिने परम्परा १६४ वर्ष पुरानो हो। दोस्रो ‘प्रेसिडेन्सिय डिबेट’ १५ अक्टुबरमा फ्लोरिडाको मियामी टाउन हलमा निश्चित थियो। यसमा सर्वसाधारणको प्रश्नको उत्तर दिने तालिका पनि तय गरिएको थियो। तर, कोरोना भाइरसको कारण यता डिबेट गराउने संस्थाले आगामी डिबेट भर्च्युअल गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
राष्ट्रपतिका प्रतिस्पर्धीको भन्दा उपराष्ट्रपतिका प्रतिस्पर्धीको बहस गुणस्तरीय
बिएल संवाददाता - वासिङ्टन
अमेरिकी राष्ट्रपतिको अगाडि टिक्न नसकेकै हो कोरोना भाइरस?
संजोग आचार्य - न्युयाेर्क
अस्पतालबाट बाहिर निस्किएका ट्रम्प आफ्नो आधिकारीक हेलिकोप्टर मरिन–वानमा बसेर १० मिनेटमा व्हाइट हाउस पुगेका थिए। यस अवधिमा उनले अनुहारबाट मास्क हटाएका थिए। ट्रम्पलाई मास्क नलगाएको अवस्थामा टेलिभिजनमा अमेरिकी जनताले प्रत्यक्ष हेरेका थिए। ट्रम्प पहिलेदेखि मास्कको विरोधमा छन्। उनी यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा दुई पल्ट मात्र मास्क लगाएर उभिएको देखा परेका थिए।
कतिको सफल होला, ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ को नारा?
रिपब्लिकन पार्टी धेरै अगाडिदेखि ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अर्थात ‘अमेरिकालाई पुनः महान बनाऔं’ भन्ने नारासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्प कोरोना संक्रमित भएपछि यो अभियान के होला भन्ने कौतुहलता उनका समर्थक माझ थियो।
अक्सिजन लेभल कम भएकै अवस्थामा दिइयाे ट्रम्पलाई डिस्चार्ज, चुनाव प्रचारमा छिट्टै फर्किने घाेषणा
ट्रम्पलाई कम्तीमा एकपटक अक्सिजनको सपोर्ट दिइएको छ। उनलाई स्टेरोइड पनि दिन थालिएको छ। स्टेरोइड कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइ गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका बिरामीलाई दिइन्छ। यस्तै उनलाई रेमडेसिभिसहितका औषधि दिइएको छ। तर, अक्सिजन लेभल कम रहेको बताइन्छ।
ट्रम्पले पाउँलान् सहानभूतिको मत ?
कोरोनाका कारण ट्रम्प चुनावी अभियानबाट अलग भएका छन् तर यसको मतलब यो होइन, उनको ध्यान अन्यत्र गएको छ। उनी चुनावको हरेक पलको जानकारी लिइरहेका छन्। चुनाव अभियान रोकिएको छैन। उनको स्थानमा उपराष्ट्रपति माइक पेन्स सक्रिय भएका छन्।
ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था र अमेरिकी चुनावको भविष्य?
अहिले अमेरिकामा चुनावको मिति सार्ने कुरामा पनि गाईगुई चलिरहेको छ। तर, मुखैमा आएको चुनावको मिति फेरबदल गर्न सोचेजति सहज पक्कै छैन। यसका लागि कांग्रेस (संसद) को दुबै सदनबाट विधेयक पास गर्नुपर्नेछ। रिपब्लिकनहरूको नियन्त्रणमा रहेको सिनेटमा यसलाई पास गर्न ट्रम्प सरकारलाई खासै अफ्ठेरो नपर्ला तर डेमोक्रेटिक पार्टीको बाहुल्य रहेको हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभबाट मिति लम्ब्याउनु फलामको च्युरा चपाएसरह हुनेछ।
‘प्रेसिडेन्सियल डिबेट’ मा चर्काचर्की:ट्रम्पले भने–वाइडेन राष्ट्रपति भएको भए २ करोड मान्छे मारिन्थेँ, वाइडेनले भने– सटअप!
ओहायोको क्लिभल्याण्डमा ९० मिनेट भएको डिबेटमा दोस्रो कार्यकालका लागि उठिरहेका रिपब्लिकनका उम्मेदवार राष्ट्रपति ट्रम्पले वाइडेनमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै भने, ‘आजको दिन (वाइडेन) राष्ट्रपति भएको भए देशमा कोरोनाको कारण २० करोड मानिसले ज्यान गुमाइसकेको हुन्थे।’
संसारभरिको ध्यान आज ‘प्रेसिडेन्सियल डिबेट’ मा
अमेरिकी मिडिया सीएनएनका अनुसार ओहायो राज्यमा हुने डिबेट ९० मिनेटको हुनेछ र यसमा ६ वटा मुद्धा समावेश गरिएको छ। राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले डिबेटलाई १५–१५ मिनेट गरेर समाप्त गर्नुपर्नेछ। फक्स न्युजका क्रिस वालेसले डिबेट सञ्चालन गर्नेछन्। क्रिस यही च्यानलका एंकर पनि हुन्। डिबेटको बेला ब्रेकको समय हुने छैन। द टेलिग्राफ पत्रिकाले यसअघि नै क्रिस वालेसलाई डेमोक्रेटिक पार्टीको बफादार भनेर ‘ट्याग’ लगाइसकेको छ। केही दिनअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले टेलिग्राफलाई अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन्।